လမ်းလျောက်သတင်းထောက် - ဘယ်တော့ ပြောင်းလဲမှာလဲ - *လမ်းဘေးသတင်းထောက် - ဘယ်တော့ ပြောင်းလဲမှာလဲ* *(မိုးမခ) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈* မဆလ ခေတ်မှာ မွေးခဲ့ပေမယ့် မဆလအကြောင်း သေချာ မသိခဲ့ဘူး။သိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ အရေး...
David Frum: Putin made the "beautiful hookers" remark on TV, and then DJT internalized and said P said it to him - which (leads us to question" how much of what DJT says is true. https://news.google.com/news/video/gC3SSK0ew_I/d1-BuatTjKNNFuMxTw-zmkw-ctrCM?hl=en&gl=US&ned...
Lost in race between first world and third - Elections are about the future. And Malaysians will get to decide theirs on the 9th May 2018. What future are Malaysians are facing and voting for? And, ...
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၁၆ ဧပြီလ ၂၀၁၈) -
Padauk Blooms Before the Thingyan Festival 2018 - (We loved to put Padauk at the desk, and displayed as our precious pieces of love.) Padauk (Gun-kino flowers) welcomed Thingyan in this year. Because of r...
U Thein Poe passed away.... - ကိုသိန်းဖိုးနဲ့ဆိုရင် သထုံမှာတုံးကတည်းက အိမ်နီးချင်းဆိုပေမယ့် သပိတ်မှောက်တော့ စခန်းမတူကြဘူး။ တောခိုတော့လည်း သူရောက်သွားတာ သေဘောဘိုး၊ နောက်တော့ ကျနော်တို့...
Democracy Now: Facebook, Zuckerberg, Ronhingya, Burma. - https://news.google.com/news/video/54S3SJiHG18/dvpOPix_o5qPIUMWOtycmXFa3MkLM?hl=en&gl=US&ned=us
အလွမ်းသယ် - အလွမ်းတွေ ထောင်းထောင်းထ ရွက်ဖောင်းလှေလို စိတ်ကူးတွေက ဦးတည်ရာမဲ့ ပြေးချသွားတယ်၊ ပုစဉ်းရင်ကွဲတကောင်လို ဒီသီချင်း တပုဒ်ထဲ ဆိုပြီးရင်းကို ထပ်ပြီးဆို။ ငါချ...
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းစာပညာ စာအုပ်တစ်အုပ် - *ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းစာပညာ စာအုပ်တစ်အုပ်(အတွေးအမြင် အမှတ် ၃၀၈ မတ် ၂၀၁၈ ) မိုးမခ၊ မတ် ၁၊ ၂၀၁၈* (”Journalism“ (သတင်းစာပညာ) လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကုို J...
ဆရာမ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)ဟောပြောသည့် ဆရာ မောင်သော်က အကြောင်း - Myanmar Muslim Media ဆရာမ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)ဟောပြောသည့် ဆရာ မောင်သော်က အကြောင်း Myanmar Muslim Media မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၈ ကြယ်ကြီးငါးပွင့် အကြောင်းဟောပြောပွဲေ...
ပဲခူးရိုးမငလျင် The Bago Yoma Earthquake - ပဲခူးရိုးမငလျင် ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၂ (၁၁ရက် ညသန်းခေါင်ယံ) ၀၀း၅၆း၂၄ အချိ်န်၊ ဖြူးမြို့ အနောက်တောင်ဖက် ပဲခူးရိုးမအတွင်းဖက် တနေရာကို ဗဟိုပြု၍ ပမာဏ ၆.၀ရှိသော ငလျင်...
A Letter for Nadi - Girl at Kuthodaw Pagoda by Saravut, Shutterstock *This poem is incomplete, inamanner of speaking. It's part of my short story titled "A Letter for Nadi,...
အခုဆို မြို့ဟာ ခိုတွေမရှိတော့ဘူး ။ - လူးလွန့်နေတဲ့ သစ်ရွက်တွေကြားက တိမ်တွေရဲ့ငြီးတွားမှု တေးသွားဟာ စိတ်ရှည်ချင်စရာမကောင်းဘူး ။ အိမ်ရဲ့ အဝေးကို ထွက်ပြေးတဲ့ ဘဲငန်းတစ်ကောင်ရဲ့ နေဝင်ချိန်လု...
Justice: What’s The Right Thing To Do? Episode 01 “THE MORAL SIDE OF MURDER” -
At the Rodneydickson's studio (26th January 2013) - At the American Artist Rodneydickson's studio (26th January 2013)
မွေးနေ့လက်ဆောင် ( သံသာလေကမ်းတိုင် ) - လာမည့် ဒီဇင်ဘာ (၁၃) ရက်ဟာ ကျတော့်သူငယ်ချင်း ကိုဇေယျာကြီးရဲ့ အသက် (၂၀) ပြည့်မွေးနေ့ ။ သူနဲ့ ကျတော်ဟာ တစ်မြို့ထဲကလာကြတာဖြစ်ပြီး သည်မှာလည်း တစ်ကျောင်း ၊ တစ်မေ...
ဇူလိုင်လထဲကို စ၀င်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ ၊ တစုံတရာက နှိုးဆွ လိုက်သလို သူ့တို့ စိတ်ဝိညာဉ်တွေ အသင့်ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ ဇူလိုင်..သြဂုတ် ဆိုတဲ့ ပြက္ခဒိန်စာလုံးတွေ ရဲ့ နောက်မှာ သမိုင်းနီနီ ညိုညိုမှိုင်းတွေက ကပ်ပါနေခဲ့ သည်ကိုး။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့်တကွ အာဇာနည်ကြီးများ” ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကိုတော့၊ ကျောင်းတက်စ အရွယ်ကတည်းက သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ သံမှိုနှက်ပြီးသား။ မုတ်သုန်မိုး တဖွဲဖွဲစွေနေတတ်တဲ့ ဇူလိုင်ဆယ့်ကိုးရဲ့ ဥသြစွဲသံကို ကြားယုံ နှင့်ပင် ၀မ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်တတ်ခဲ့သလို ၊ ဒီဇူလိုင်လထဲ မှာပဲ နောက်ထပ် ၀မ်းနည်းစရာ နေ့ တနေ့ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း ရိပ်ဖမ်း သံဖမ်း သိနေခဲ့ ကြသည်။ တကယ်တော့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် ဆိုတာ ၊ ဥသြသံ မစွဲ၊ မျက်ရည်မ၀ဲ နိုင်ပဲ ၊ အံကြိတ်ခဲ ရင်း မျိုးဆက်တခု ကနေ မျိုးဆက်နောက်တခုကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် လက်ဆင့်ကမ်း ခဲ့ ရတဲ့ အာဇာနည်နေ့ နောက်တနေ့ ပဲ မဟုတ်လား။
အဲဒီလိုနဲ့ ကျောင်းဖတ်စာအုပ်တွေ ရဲ့ ပြင်ပက ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီး နဲ့ ဆဲဗင်းဂျုလိုင် ဆိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကြောင်းအရာတွေ ဟာ၊ သူတို့တွေရဲ့ အိပ်ယာဝင် ပုံပြင် တွေထဲမှာ ။ ရေနွေးကြမ်း စကားဝိုင်း တွေမှာ။ ဓါတ်ပုံဟောင်းတွေထဲက..အဖြူအမဲ ပုံရိပ် တွေကြားမှာ..။ ၀ါကျင်ကျင် ဒိုင်ယာရီ စာရွက်ပေါ်က.. ခပ်သော့သော့ မှင် စာလုံး တွေပေါ်မှာ..။
xxx ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ အဲဒီနေ့ဟာ စနေနေ့ပါ။ နေ့လည် တစ်နာရီမှာ သမဂ္ဂအစည်းအဝေး ခန်းမမှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပပါတယ်။ ဥက္ကဌက ကိုဗဆွေလေးပါ။ အခန်းအနားမှူးကတော့ ကိုသာဒိုးလား ကိုလှရွှေလား မမှတ်မိတော့ပါ။ အစည်းအဝေးမှာ ကျောင်းသားထု တခဲနက် ဆုံးဖြတ် တာတွေထဲက မှတ်မိသလောက်ကတော့...ကျောင်းသားတွေကို ဖိနှိပ် ချူပ်ချယ်တဲ့ စည်းကမ်း အမျိူးမျိူးကို ကန့်ကွက်တယ်။ စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းတာကိုလည်း ကန့်ကွက်တယ်။ တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေများကို ရုတ်သိမ်းတာကိုလည်း ကန့်ကွက်တယ် စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ သမဂ္ဂရှေ့ကစပြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာပဲ ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်ကာ လှည့်လည်ပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့ မှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ လူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်။xxx
အဲဒီ ဒိုင်ယာရီစာရွက်ရဲ့ နောက်တမျက်နှာမှာတော့ ၊ ဇူလိုင်(၇)ရက်နေ့ ညနေစောင်းလောက်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းကြီးကို လေးဖက်လေးတန် ပိတ်ဆို့ပြီး ၊ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား (၁၀၀) ကျော်ရဲ့ သွေးမြေကျပွဲ ကြီး။ နောက်တနေ့ မနက် လင်းအားကြီးမှာ ကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟီးသွားတဲ့ ပေါက်ကွဲသံကြီး။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လေထဲမှာ ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့ ၊ အခိုင်အခန့် သမဂ္ဂအဆောက်အဦကြီး ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ တရွက်ပြီး တရွက်။
၁၉ ၅၈-၅၉ ကာလ ကျောင်းသားတစု ယူနီယံရှေ့တွင်-
အဲဒီ သမဂ္ဂကြီးထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကျောင်းဆောင်တွေ တခုခြင်း ကနေပြီး အမူဆောင်တွေ ရွေးကြတော့ ၊ တယောက်က အဆိုတင်သွင်း နောက်တယောက်က ထောက်ခံပေးရတယ် ဆိုတဲ့ မတ်တပ်ထ လက်ထောင် မဲပေးစနစ် ဆိုတာ၊ သူတို့ အတွက် အဆန်း ။ အဆောင် သဟာယ နဲ့ စာဖတ်အသင်း ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးမှာ ကိုက ကြီးကျယ်ခမ်းနားမူ တွေ အပြည့် နဲ့။
လက်ရှိရောက်နေတဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကြီး ကိုတောင် မေ့လျော့ ရင်း၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မြတ်လေးကြီး ရေးစပ်ခဲ့တာဆိုတဲ့ `တပ်ဦးကြွေးကြော်သံ´ သီချင်းအဟောင်းလေးကို ၊သူတို့ အဖေ ဆိုပြတဲ့ အတိုင်း အသံနေ အသံထား နဲ့ ဆိုတတ်နေခဲ့ ကြသည်။
တပ်ဦးလက်ရေး စတိုင် နှင့် ရေးကူးထားသော တပ်ဦးကြွေးကြော်သံ သီချင်း
ရဲဘော်အပေါင်းတို့ရေ.. ခွပ်ဒေါင်းရဲဘော် အပေါင်းတို့ရေ..
ရာဇ၀င် ကဏ္ဍသစ်..တည်ဆောက် ကြမယ်လေ...
ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး စနစ်..အုတ်မြစ် ချရစ်ပေ...
သစ်မြစ် ပင်စည် ရှည်...ရှည်...
အဲဒါ..ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တိုင်းရဲ့..
( ဟေ့..ရဲဘော်..ရဲဘော် အတွက်..
ဖေ..တပ်ဦး နဲ့ တကသ တူတူပဲလား.. လို့ ၊ နားမလည်တဲ့ သင်ခန်းစာ တခု လို မေး တော့ …
“တသားတည်း လို့ ပြောရမှာပေါ့ကွာ.. တကသ ဆိုတာကြီးက တကယ့် တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေတွေနဲ့ အညီ ဖွဲ့ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီး..။ အစိုးရတခုဖြစ်ဖို့် ပါတီတွေ ပြိုင်ကြသလိုပဲ…နှစ်တိုင်း..နှစ်တိုင်း တကသကြီး အတွက် လည်း ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေ ပြိုင်ကြရတာပေါ့.. အဲဒီတုန်းက.. အစိုးရ အရာရှိ ၀န်ကြီး ၀န်ကလေးတွေ ရဲ့ သားသမီးတွေ အများစုပါတဲ့ ဒီအက်စ်အို လို့ ခေါ်တဲ့ Democratic Students Organization အဖွဲ့ကလည်းတခု။ အဲဒီ နှစ်ခုကြားထဲကနေ ခုခေတ်လိုပေါ့.. no anti, no pro, no politics ဆိုတဲ့ “သန့်ရှင်း” အဖွဲ့က တခု..။ နောက် “တပ်ဦး” ပေါ့ကွာ… ပထမတော့ “တိုးတက်” ဆိုတဲ့ နံမယ်နဲ့ အနယ်အနယ် အရပ်ရပ်က တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသားတွေ အများဆုံး ပါ တာပေါ့…နောက်တော့ ၅၄ ကနေ တောက်လျှောက် သမဂ္ဂထဲမှာ အနိုင်ရလာခဲ့တာ ယူနီယံကြီး ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ခွဲခံလိုက်ရတဲ့ အဲဒီ ၇ ရက် နေ့ ထိပဲပေါ့…”
ကျော်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဦးဗဆွေလေး( မောင်ထွန်းသစ်) ရဲ့ လက်ရေးမူ
အမျိုးသားပညာရေး တွေ..ပြုပြင်ဖို့..စုဆင်ဖို့ (ဒို့)
ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး...အသက်သွေး လှူမည်...
ယုတ်မာတဲ့ စနစ်ကို..အမြစ်ပါ လှန် မည်....
(အောင်ပြီ)၃ ..မုချ...ဒို့သာ အောင်မည်...
အမျိုးသားပညာရေး ဆိုတာကို ဖတ်စာအုပ်ထဲကနေ အော်ကျက်နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာတော့ ဘာမှန်း သူတို့ ရေရေရာရာ မသိသေး။
အဓိဌါန် တူညီ...ကျောင်းသား..ကျောင်းသူ တို့သည်..
ဘယ်တော့မှ..အနိုင်မခံ..အလံဖြူ မလွင့် လိုသည်..
တပ်ဦးကြီး အလံ အောက်မှာ..စုဝေး...လို့တည်..
ညီရင်း အကိုလို..မောင်ရင်း နှမတွေ စုံစုံညီ..
အပြုံးချင်းလှယ် လက်ချင်းဆက်ကာ ညီညွတ်ဖို့ သစ္စာပြုမည်
ပန်းတိုင်း ပွင့် ရမည်..ကျောင်းတိုင်းဖွင့်ရမည်..
အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအရွယ် ရှစ်ဆယ့်ရှစ် လူထုအုံကြွမူကြီး ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒီသီချင်းလေးရဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ကို သူတို့ ပြည့်ပြည့်၀၀ နားလည် သဘောပေါက်ခဲ့လေပြီ။ အရေးတော်ပုံအောင်ပါမည် ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို ၊ ပီပီပြင်ပြင် ဆိုတတ်လေတော့ပြီ။ ဇူလိုင်ဝိညာဉ်တို့ သူတို့ ကိုယ်တွင်းက နိုးထ ခဲ့လေပြီ။
အဲဒီလို နဲ့ မျိုးဆက် အဆင့်ဆင့် ပခုံးပြောင်းရင်း၊ သမိုင်းဘီးကြီး တရစ်ပြီး တရစ် လည်ရင်း၊ ဇူလိုင်ဝိညာဉ်တွေလည်း တခေတ်ပြီး တခေတ် အသစ်ပြန် ဖြစ်ကြသည်။ ယခုပင် ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ရွှေရတု တိုင်ပြီး၍ ရှစ်ရက်ရှစ်လ ငွေရတု ၀င်ခဲ့ပြီ။ စစ်အာဏာရှင် အကျင့်ဆိုးကို စတင်အန်တု ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်ဝိညာဉ်သည် စစ်အာဏာရှင် စနစ်တခုလုံးကို တွန်းလှန် ဆန့်ကျင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်စိတ်ဓါတ် နဲ့တင် အဆုံးသပ်သွားမည် မဟုတ်သေး။ စစ်အာဏာရှင် အရိပ်အငွေ့ တွေ မကင်းစင် မခြင်း
တကယ်သာ မြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာ၊ အမုန်းတရား နဲ့ အကြောက်တရား အရိပ်အငွေ့ တွေ ကင်းစင် ကွယ်လွင့်ချင်တယ် ဆိုရင် …မြန်မာပြည်သစ်ကြီး တည်ချင်တယ်ဆိုရင် ၊ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးတို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေထဲမှာ ၀ဲချာလည် နေမဲ့အစား ၊ ၀န်ချတောင်းပန်ရေး လို့ ပြောလာတိုင်း မသိယောင်ဆောင် စကားလမ်းလွှဲနေရမဲ့အစား ၊ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီး ၊ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြု သမိုင်းတင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ၊ အားလုံးအတွက် ကျေအေး ပြေလည် အတူသွားနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတခုကို ရောက်နိုင်မှာပါ။ အာဇာနည်နေ့မှာ သြဥ ဆွဲ-မဆွဲ ဆိုတာလောက်နဲ့တင်မက ၊ ငွေရတုအမှတ်တံဆိပ်က ဒေါင်းလား- ချိုးလား သတ်မှတ်နေယုံနဲ့တင်မက၊ သူရဲကောင်းနေ့ တွေ တရားဝင် ပေါ်ထွန်းလာဖို့ ၊ အချိန်အခါကောင်း ဖြစ်သင့်ပါပြီ။
ဇူလိုင်ဝိညာဉ်တွေ စတင် မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီး ကိုလည်း၊ ကတိတွေ ပေးထားခဲ့တဲ့ အတိုင်း ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး အုတ်မြစ် ချသင့်ပါပြီ။ အမိတက္ကသိုလ်ကြီးလည်း နံနက်ခင်းအလင်းရောင်တွေ နဲ့ အတူ ကြည်လင် လန်းဆန်းစွာ နိုးထ သင့်ပါပြီ။ ပန်းတိုင်း ပွင့်ရပါဦးမည်။ ကျောင်းတိုင်း ဖွင့်ရပါဦးမည်။
၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၃ နေ့ထုတ် Eleven နေ့စဉ် တွင် ဖော်ပြပြီး
( ဓါတ်ပုံများသည် ၊ မိသားစုပိုင် အမှတ်တရများဖြစ်သည်)
Labels: Burma History , personal , Printed
ရှားပါးဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ဇူလိုင်အတွေးလေးကိုပြန်ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါကေ. ကိုယ်မကြုံကိုယ်မဆုံခဲ့ပေမယ့် သွေးကစကားပြောတော့ ခုချိန်ထိနာနာကျင်ကျင်ရှိတုန်းပဲကေ